Classical nobuciko bokusina - kuyinto isisekelo lapho bonke ubuciko umdanso yomngcwabo. Ukuba eyaziwa zonke ubuqili bakhe, ungakwazi kahle iyiphi uhlobo okuthandayo.
Kanjani nobuciko bokusina classical?
Dance - ingenye ubuciko endala. Kusukela esikhathini eside esidlule, ngokusebenzisa ukunyakaza komzimba kubantu ukuveza imizwa yabo, imizwa, ngisho ukuxhumana ngaphansi kwamandla aphezulu. Akubuzwa ukuthi ngamunye abantu abaningi abahlala kule planethi, has nemidanso ayo ethize, ikakhulukazi ukuthi walandisa amasiko, kwezenhlalo yasekhaya. nobuciko bokusina Classical ithathe ukunyakaza ngendlela enhle kakhulu, ngomusa futhi lezo ndawo yayikhona isiko dance zezizwe ezihlukahlukene.
Ngaphandle kokwehluka osekushiwo, lobu buciko usemncane. Ubudala nobuciko bokusina classical (injalo zamanje) akuyona iminyaka engaphezu kuka-400. wo fika abantu ukweleta ukuba izikhulu Italy. Phakathi Renaissance ezindaweni ezisenyakatho yezwe, ayengeke amukelwe ayiphelele ngaphandle nokudansa. I bababonisi Abahleli bomdanso yesimanje zazidansa master, owakhonza esigodlweni sayo. Zasungula nalawo mazinga iyunifomu (uhlobo "nenhlonipho umdanso"), okuyinto silandela namuhla.
Kanjani classical umdanso silulumagama?
Ngu XVI ekhulwini nobuciko bokusina classical sandile kulo lonke elaseYurophu. Kodwa lapho ukuzamazama kwaqala khona intuthuko yalesi ubuciko kwakuyiyona France. Kusukela ekusungulweni yayo e-Paris Royal Academy of Dance, nobuciko bokusina wawungelona nje uhide ukuzijabulisa enkantolo, futhi endaweni ehlukile yobuciko. Ngisho nangemva kweminyaka 100 Raul Feye wadala isimiso umdanso izakhi classical. Ukuze ngamunye wabapha isihloko French. Manje, zonke abadansi zomhlaba usebenzisa nabo silulumagama babo bomsebenzi.
nobuciko bokusina Classical abadala kanye nezingane yakhiwa izakhi efanayo, kodwa into enzima yokuhlabelela zehluke ezibonakalayo. Nokho, nemiqondo eyisisekelo kanye nezidingo zihlala zinjalo.
Isimo sokuqala nesibaluleke kakhulu kuyinto vyvorotnost ezinhle. Kuyinto ikhono akusebenzise ngaphandle ngokuhlanganyela hip, okuvumela emlenzeni ngezinyawo, ngokukhethekile, thatha isikhundla esikhulu. Ngisho noma impahla alinikwa indoda ngokuzalwa, kungenzeka ukuthuthukisa ngokusebenzisa ukuqeqeshwa njalo nangenkuthalo.
Pose - sibalo static, okuyinto kunqunywa isikhundla komzimba, omzimba, ngisho ikhanda umdansi. Kuye isihlobo isikhundla baye ehholo, zibhekise kungaba livuliwe noma livaliwe. The main ngemfanelo Croizet (Croisee), efase (effacee), Ecarte (ecartee) kanye arabesques (arabesques).
Isikhundla - lena eziyisisekelo ekugcineni isikhundla. Uma kuziwa izinyawo, zingabantu Yiqiniso, kufanele kube phansi. Leso sikhundla inquma isikhundla efanele emzimbeni, amnike umusa umdanso - imiva.
School of nobuciko bokusina classical, ngokuvamile iqala nge vyvorotnosti ukuthuthukiswa evumela ukuthi izinyawo ukuthatha izikhundla ezinkulu. Ziyakwazi eziyisithupha:
endaweni yokuqala - izinyawo kukhona nabo izithende zakhe futhi ukhiphe nibonakala ukwakha umugqa oqondile phansi (noma ama-degree angu-180);
isikhundla lesibili esuselwe lokuqala (zonke imilenze yakha line efanayo ngqo, kodwa ibanga obakhiwa kubo, ilingana usayizi ngonyawo olulodwa);
isikhundla yesithathu - esithendeni unyawo umuntu yayicindezele phakathi kwezinye (ngaleyo ndlela, umlenze, namanje yakha i-engela degrees 180);
isikhundla sesine - vyvorotnye imilenze ahlelwe parallel nomunye buqamama ulingana nobude ngonyawo olulodwa;
yesihlanu isikhundla - izinyawo sicindezelwe ngokuqinile komunye nomunye, ne amasokisi kanye izithende eduze komunye nomunye;
lesithupha isikhundla - izinyawo parallel nomunye futhi perpendicular isikhundla umzimba.
Smooth isandla ukunyakaza ukunikeza umdanso ubuhle, isihe, imiva. Nokho, ukuze sifinyelele yalokho, kubalulekile ukwazi izikhundla zabo eziyisisekelo, okuyilezi:
wokulungiselela isikhundla - izingalo phansi phansi, izindololwane nezandla zimikiswa;
Ukuma kokuqala - kusukela ukulungiselela kufanele baphakamise izandla, kokuwalungisa phambi ezingeni diaphragm;
isikhundla yesibili - kusuka endaweni yokuqala okumele buhlanjululwe ezandleni amaqembu (kuleli cala, endololwaneni kanye isandla akumelwe kube nokunensa, kodwa kufanele kube lula ukuqoqa);
isikhundla yesithathu - ngowokuqala wezandla zakhe nezishiwo ngenhla kwekhanda lakhe.
amaqembu Major ukunyakaza
Isayensi nobuciko bokusina ngempela eziyinkimbinkimbi. umdanso Classical akudingi nje kuphela amakhono ngokomzimba kodwa futhi ulwazi theory. Ngakho, lokhu okulandelayo amaqembu eziyisisekelo iminyakazo;
plie (plier) - eguqa ngamadolo;
etandr (etendre) - elula umzimba nasemilenzeni;
relevé (relever) - ephakamisa izinzwani;
glissade (glisser) - bushelelezi glide unyawo phansi;
iseli (sauter) - jumping;
elanse (elancer) - aphonse imilenze;
Uhambo (tourner) - niguquke uqobo.
Lena ngesisekelo nobuciko bokusina, kodwa akuyona uhlu oluphelele imikhiqizo yayo. I dance kuyinto bushelelezi shift izikhundla yanjalo usebenzisa ukunyakaza wathi eziyisisekelo.
Ukuvivinya umzimba okungenani ebhentshini
Yemidlalo Yeshashalazi Yase nobuciko bokusina classical iqala Ukuzivocavoca ngesikhathi ekhethekile ballet umshini. Lokhu iqoqo umzimba okuhloswe ngazo ukuthuthukisa uhlelo zemisipha. Kuyinto nge Ukuzivocavoca iqala umsebenzi walo kwanoma iyiphi umdansi. Isakhiwo kuhlanganisa izivivinyo kwezilandelayo:
Plie (Plies) - ezimfushane bushelelezi kuzo zonke izikhundla eyaziwayo izinyawo (mhlawumbe isigamu futhi ijulile), okuhloswe ngazo iyazifudumeza imisipha nemisipha.
Battement tendu (Batman tendus) - umbukiso Sock phansi nge voltage yonkana kwemilenze edonsa lift (Achilles Kutfutfukisa kunomthelela ukuthuthukiswa jikelele kwemisipha).
Battement Jete (Batman zhete) - emfushane Sock yabalingisi, ephelezelwa ebukhali ikhefu imilenze futhi amaphaphu e-imbilapho (ukuthuthukiswa hip nasemaqakaleni).
Rond de jambe par Terre (Ron De Jamba nezitebele zamahhashi) - umlenze zokusebenza uchaza umbuthano phansi (lesi sivivinyo ikhuthaza vyvorotnosti kanye nendlu yaqala ukufudumala joint hip).
zu dehors - ukunyakaza iqondiswe phambili maqondana umlenze asekelayo;
zu dedans - Sock "ukudweba" umbuthano kolunye uhlangothi;
Battement fondu (Batman fondue) - ngokushelela futhi plastically umlenze asekelayo lehliselwa kuya "Plies demi", futhi ukusebenza kulesi izimisele kunini kwedolo, ngokuthinta uzwane kuya iqakala (elichumayo amadolo ukwesekwa umlenze sandisiwe, futhi ukuhlinzwa kuyalungiswa at 45 degrees).
Battement frappe (Batman froppe) - ebukhali, ukunyakaza esinomdlandla, phakathi kwesikhathi lapho zokusebenza umlenze "basanga" ukusekelwa unyawo iqakala.
Battement Pique (Batman isiqongo) - kuyinto abukhali futhi iDemo phambili izinyawo phansi (sengathi ukudansa ithinta surface ashisayo noma inaliti oluhlabayo).
Battement releve lent (Batman relevé liang) - olunensayo umlenze lift a ukuphakama hhayi ngaphansi kuka-90 degrees (isikhundla kuwufanele imizuzwana embalwa ukulungisa, bese ubuyela original).
Grand battement Jete (Grand battement zhete) - lo msebenzi kungaba kubhekwe salokhu zhete kuyinkimbinkimbi Batman, phakathi kwesikhathi lapho kukhona igebe abukhali ezinkulu phakathi kwemilenze (kulesi simo, ukusebenza kufanele ifike degrees okungenani u-90).
Kuyaphawuleka ukuthi ukuvivinya umzimba ngalokho okubizwa ngokuthi i cross, lapho unyawo yanjalo ezihamba phambili, emaceleni emuva ezaziwayo. Emuva lé ekuqaleni ukuzilolonga ukuqeqeshwa lwenziwa umlingisi eziyisisekelo aphansi. Singasho sabangafundile inhlanganisela kamuva eziyinkimbinkimbi ngokwengeziwe ukuthuthukisa plasticity futhi umusa.
nobuciko bokusina Classical izingane
Mhlawumbe kaningi kunanoma iyiphi enye ingxenye, abazali babhalisa izingane zabo kwezinye ezindaweni zemidanso. Futhi ngisho noma esikhathini esizayo leyo ngane ngeke abe abadumile ballet dancer, kula makilasi ngeke isebenze ngenxa lutho. Izinzuzo izingane Choreography elandelayo:
isizukulwane kokuma kulungile ukulungiswa yayo;
obumba uhlelo kwemisipha, esiklanyelwe ukuvimbela yomgogodla kusukela watsheka;
ukuthuthukisa ukuvumelana nezimo nokukhuthazela ngokomzimba;
nokuvinjelwa kwezifo of the system zemisipha;
kwesisindo kanye nokugcinwa isisindo umzimba okahle;
ukuzinza kulandzelana nekuhlunga tinsita vestibular.
Ngaphezu kwalokho, ukuvivinya umzimba njalo kusiza zifezeke nobuciko bokusina Gait enhle, umusa yemvelo kanye, yebo, sibalo evumelanayo (okuyinto ebaluleke for kokubili amantombazane nabafana). Nokho, uma kukhona izinkinga kanye uhlelo senhliziyo nemithambo yegazi, ukuqeqeshwa kufanele aphathwe ngokuqapha. Kwezinye izimo, bangase contraindicated.
Kanjani ukuqala ukuqeqeshwa umdanso?
Okuxakayo ukuthi ukudlala nobuciko bokusina classical iqala nge izinyathelo umdanso. He is isisekelo iyiphi kompoziytsii. Isinyathelo kumele kube sobala, vyvorotnym and plastic. Phakathi nokuqeqeshwa, ukuthuthukiswa enganele baka-Achilles umsipha bungabonakala, idolo noma hip ngokuhlanganyela, okuyinto kushintshwe esebenzisa amakilasi elivamile.
Elinye iphuzu elibalulekile iyona edeskini. Emgogodleni kufanele side thwi, izibunu nesisu some, encishisiwe blade emhlane nasemahlombe zehliswa. Uma umzimba kuzoba isimo ekhululekile, ke uzolahlekelwa ukuzinza kwalo okuphelele nokulinganisela, ngakho-ke akukho traffic ngeke uthole. Yiqiniso, okokuqala, kunzima ngokwanele ukuba agcine ukuma kwakho, kodwa ngemva kwezinyanga ezimbalwa zokuvivinya umzimba njalo kuyinto isikhundla umzimba luba yinto engokwemvelo.
Contemporary nobuciko bokusina classical - kuwumphumela umsebenzi eminyaka ubudala odokotela kanye theorists abaye wadala uhlelo eziyingqayizivele ukunyakaza futhi izikhundla, kanye umdanso ulimi okuyinto waqonda emhlabeni wonke. Ngesikhashana nje esifushane (enkulu mlando iminyaka engu-400 - akusiyo kangaka) dance uye savela inkulumo bakudala imizwelo kanye isici yamasiko ezingaqondakali e art real, okuyinto kungaqali sakhathala bencoma esintwini.
Ngeshwa, abantu abaningi basakholelwa nobuciko bokusina yokuchitha isizungu engenangqondo. Noma kunjalo, isayensi. Futhi ngisho noma i-dance ngeke career yakho noma wokuzilibazisa eliyingqayizivele, amakilasi ngeke azithalalise. Ukuvivinya umzimba njalo kuyokusiza ukudala sibalo amahle ukuma, ukuthuthukisa Gait bushelelezi, ukunyakaza yakho uyakupha umusa. Ngaphezu kwalokho, uzobe oVikelwe ezifweni eziningi of the system zemisipha.
Kanjani ukudansa a striptease? Ukuyenga neyakhe indoda
Izidakamizwa "Genferon". Yokusetshenziswa
I-Uppercott iyisikhali esinamandla ku-arsenal yebhokisi
Kanjani "Yandex" uqaphe operation yomsebenzisi? Izindlela lobunhloli "Yandex"